परमेश्‍वरका दैनिक वचनहरू: जीवनमा प्रवेश | अंश ५३० | सर्वशक्तिमान् परमेश्‍वरको मण्डली
आज, कतिपय मानिसहरू परमेश्‍वरद्वारा प्रयोग गरिएको खोजी गर्छन्, तर विजय गरिसकेपछि तिनीहरूलाई सोझै प्रयोग गर्न सकिँदैन। आज बोलिएका शब्दहरूका विषयमा भन्दा, यदि, जब परमेश्‍वरले मानिसहरूलाई प्रयोग गर्नुहुन्छ, तँ तिनलाई पूरा गर्न असमर्थ छस्, तब तँ अझै पनि सिद्ध पारिएको छैनस्। अर्को शब्‍दमा भन्दा, मानिसलाई सिद्ध बनाइने युगको अन्त्यको आगमनले नै मानिसलाई परमेश्‍वरले हटाउनुहुन्छ कि प्रयोग गर्नुहुन्छ भन्‍ने कुरालाई निर्धारण गर्नेछ। विजय गरिएकाहरू निष्क्रियता र नकारात्मकताका उदाहरणहरू बाहेक अरू केही होइनन्; तिनीहरू आदर्शहरू र नमुनाहरू हुन्, तर तिनीहरू पूरक बाहेक केही पनि होइनन्। मानिसको जीवनको स्वभाव परिवर्तन भएपछि मात्रै, र उसले भित्र र बाहिर नै परिवर्तन प्राप्त गरेको छ भने मात्रै, उसलाई पूर्ण रूपमा सिद्ध बनाइएको हुनेछ। आज, तिमीहरू कुन चाहन्छौ: विजय गरिनु, वा सिद्ध पारिनु? तँ कुन कुरालाई प्राप्त गर्न चाहन्छस्? के तैँले सिद्ध पारिनुका लागि पूरा गर्नुपर्ने सर्तहरूलाई पूरा गरेको छस्? तँमा अझै कुन-कुन सर्तहरूको कमी छ? तैँले आफैलाई कसरी सुसज्जित बनाउनुपर्छ, र आफ्‍ना त्रुटिहरूको लागि तैँले कसरी हर्जाना भर्नुपर्छ? तँ सिद्ध पारिने मार्गमा कसरी प्रवेश गर्नुपर्छ? तँ कसरी पूर्ण रूपमा समर्पित हुनुपर्छ? तँ सिद्ध पारिनको लागि अनुरोध गर्छस्, त्यसैले के तँ पवित्रताको खोजी गर्छस्? के तँ त्यस्तो व्यक्ति होस् जसले सजाय र न्यायको अनुभव गर्न खोजी गर्छ ताकि तँ शुद्ध हुन सक्? तँ शुद्ध पारिन चाहन्छस्, त्यसैले के तँ सजाय र न्यायलाई स्वीकार गर्न इच्‍छुक छस्? तँ परमेश्‍वरलाई जान्‍नको निम्ति आग्रह गर्छस्, तर के तँसँग उहाँको सजाय र न्यायको ज्ञान छ? आज, उहाँले तँमा गर्ने धेरैजसो कार्य सजाय र न्याय नै हो; तँमा गरिएको यो कार्य सम्‍बन्धी तेरो के ज्ञान छ? के तैँले अनुभव गरेको सजाय र न्यायले तँलाई शुद्ध पारेको छ? के यसले तँलाई परिवर्तन गरेको छ? के यसले तँमा कुनै प्रभाव पारेको छ? के तँ आजका धेरै कामद्वारा थकित छस्—श्रापहरू, न्यायहरू, र भन्डाफोरहरू—वा यी कुराहरू तेरो लागि निकै लाभदायक छन् भन्‍ने तँलाई लाग्छ? तँ परमेश्‍वरलाई प्रेम गर्छस्, तर तँ किन उहाँलाई प्रेम गर्छस्? के तैँले थोरै अनुग्रह प्राप्त गरेको हुनाले परमेश्‍वरलाई प्रेम गर्छस्? वा शान्ति र आनन्द प्राप्त गरिसकेको हुनाले तैँले परमेश्‍वरलाई प्रेम गर्छस्? वा उहाँको सजाय र न्यायले शुद्ध पारिएपछि तँ परमेश्‍वरलाई प्रेम गर्छस्? वास्तवमा के कुराले तँलाई परमेश्‍वरलाई प्रेम गर्ने तुल्याउँछ? सिद्ध पारिनको लागि पत्रुसले कुन-कुन सर्तहरूलाई पुरा गरे? उनलाई सिद्ध पारिएपछि, यसलाई व्यक्त गरिएको अत्यन्तै महत्त्वपूर्ण तरिका के थियो? के तिनी उहाँको लागि तृषित भएकाले हो कि तिनले उहाँलाई देख्‍न नसकेकोले, अथवा तिनलाई तिरस्कार गरिएको कारणले तिनले प्रभु येशूलाई प्रेम गरेका थिए? वा के तिनले कष्टहरूका संकष्टहरूलाई स्वीकार गरेका हुनाले, र आफ्‍नै अशुद्धता र अनाज्ञाकारीतालाई जानेकाले, प्रभुको पवित्रतालाई जानेको कारणले तिनले प्रभु येशूलाई प्रेम गरेका थिए? के परमेश्‍वरको सजाय र न्यायले गर्दा परमेश्‍वरप्रतिको उसको प्रेम अझै शुद्ध भयो कि अन्य कुनै कुराले गर्दा? यो कुनचाहिँ हो? परमेश्‍वरको अनुग्रहको कारणले, र आज उहाँले तँलाई केही सानो आशिष् दिनुभएको हुनाले तँ परमेश्‍वरलाई प्रेम गर्छस्। के यो साँचो प्रेम हो? तैँले परमेश्‍वरलाई कसरी प्रेम गर्नुपर्छ? के तैँले उहाँको सजाय र न्यायलाई स्वीकार गर्नुपर्छ, र, उहाँको धर्मी स्वभावलाई अवलोकन गरिसकेपछि, उहाँलाई साँचो रूपमा प्रेम गर्न सक्षम हुनुपर्छ, जसले गर्दा तँ पूर्ण रूपमा विश्‍वस्त हुन्छस्, र उहाँको बारेमा ज्ञान पाउँछस्? पत्रुसले जस्तै, के तैँले परमेश्‍वरलाई पर्याप्त रूपमा प्रेम गर्न सक्दैनस् भनेर तँ भन्‍न सक्छस्? तैँले खोजी गर्ने कुरा सजाय र न्यायपछि विजय गरिनु हो कि, वा सजाय र न्यायपछि शुद्ध पारिनु, सुरक्षित गरिनु र वास्ता गरिनु हो? यीमध्ये कुनको खोजी तँ गर्छस्? के तेरो जीवन अर्थपूर्ण छ, वा यो अर्थहीन र मूल्यहीन छ? तँ देह चाहन्छस् कि सत्यता चाहन्छस्? तँ न्यायको कामना गर्छस् कि सहजताको? परमेश्‍वरको धेरै कार्यलाई अनुभव गरिसकेपछि, र परमेश्‍वरको पवित्रता र धार्मिकतालाई अवलोकन गरिसकेपछि, तैँले कसरी खोजी गर्नुपर्छ? तैँले यो मार्गमा कसरी हिँड्नुपर्छ? तैँले परमेश्‍वरको प्रेमलाई कसरी व्यवहारमा लागू गर्नुपर्छ? के परमेश्‍वरको सजाय र न्यायले तँमा कुनै प्रभाव पारेको छ? तँमा परमेश्‍वरको सजाय र न्यायको ज्ञान छ कि छैन भन्‍ने कुरालाई तँ कस्तो जीवन जिउँछौ, र तैँले परमेश्‍वरलाई कुन हदसम्‍म प्रेम गर्छस् भन्ने कुरामा निर्भर हुन्छ! तँ परमेश्‍वरलाई प्रेम गर्छस् भनेर तेरो ओठले भन्छ, तैपनि तँ जुन जीवन जिउँछस् त्यो पुरानो, भ्रष्ट स्वभाव हो; तँमा परमेश्‍वरको कुनै डर छैन, तँमा विवेक हुने कुरा त परै जाओस्। के त्यस्ता मानिसहरूले परमेश्‍वरलाई प्रेम गर्छन्? के त्यस्ता मानिसहरू परमेश्‍वरप्रति निष्ठावान हुन्छन्? के तिनीहरू परमेश्‍वरका सजाय र न्यायलाई स्वीकार गर्नेहरू हुन्? परमेश्‍वरलाई प्रेम गर्छु र उहाँलाई विश्‍वास गर्छु भनेर तँ भन्छस्, तैपनि तँ आफ्‍ना विचारहरूलाई छोड्दैनस्। तेरो काममा, प्रवेशमा, तैँले बोल्‍ने वचनमा, र तेरो जीवनमा, परमेश्‍वरप्रतिको तेरो प्रेमको कुनै प्रकटीकरण छैन, र परमेश्‍वरप्रतिको कुनै श्रद्धा छैन। के सजाय र न्याय प्राप्त गरेको व्यक्ति यही हो? के यस्तो व्यक्ति पत्रुस हुन सक्छ? के पत्रुसजस्ता मानिसहरूमा ज्ञान मात्रै हुन्छ, तर जीवन जियाई हुँदैन? आज, वास्तविक जीवन जिउनको लागि मानिसलाई चाहिने सर्त के हो? के पत्रुसका प्रार्थनाहरू उसको मुखबाट आएका शब्‍दहरूभन्दा बढी केही पनि थिएनन् त? के ती उनको हृदयको अन्तस्करणबाट आएका शब्‍दहरू थिएनन् र? के पत्रुसले प्रार्थना मात्रै गर्थे, र सत्यतालाई अभ्यास गर्दैनथे? तेरो खोजी कसको लागि हो? परमेश्‍वरको सजाय र न्यायको बेला कसरी तैँले आफूलाई परमेश्‍वरको सुरक्षा र शुद्धीकरणलाई प्राप्त गर्ने तुल्याउँछस्? के परमेश्‍वरको दण्ड सजाय र न्याय मानिसको लागि कुनै लाभ छैन? के सबै न्याय दण्ड नै हो? के शान्ति र आनन्द, भौतिक आशिष्‌हरू र क्षणिक सहजता मात्रै मानिसको जीवनको लागि लाभदायक हुनसक्छ? यदि मानिस सुखद र सहज परिस्थितिमा, न्यायको जीवन विहीन भएर जिउँछ भने, के उसलाई शुद्ध पारिन सक्छ? यदि मानिसले परिवर्तन हुन र शुद्ध पारिन चाहन्छ भने, उसले सिद्ध पारिनुलाई कसरी स्वीकार गर्नुपर्छ? आज तैँले कुन मार्गलाई छनौट गर्नुपर्छ?